समायोज्य आईप्याड स्ट्यान्ड, ट्याब्लेट स्ट्यान्ड होल्डरहरू
१. तपाई कुन प्रकारको पीसीबीएसमा विशेषज्ञ हुनुहुन्छ?
हामी सिge्ग-साइड पीसीबी, डबल साइड पीसीबी, मल्टीलेयर पीसीबी, एल्युमिनियम पीसीबी, स्प्रे टिन पीसीबी, इमर्ज्ड गोल्ड पीसीबी, आदि उत्पादनमा विशेषज्ञ छौं।
२. तपाईको नेतृत्व समय कुन हो?
सीसा समय यहाँ सामान्यतया समयनिष्ठ हुन्छ, सामान्यतया पीसीबी नमूना को लागी day--5 दिन, जन उत्पादनको लागि -15-१-15 दिन। केहि विशेष अवस्थाको लागि हामी ग्राहकलाई अग्रिम सल्लाह दिन सक्छौं ग्राहकको छेउमा हुने कुनै पनि आशा र नोक्सानबाट बच्न।
W. तपाइँको परीक्षण नीति के हो र तपाइँ कसरी गुणवत्ता नियन्त्रण गर्नुहुन्छ?
नमूनाका लागि, उडान जाँच द्वारा प्राय: परीक्षण गरिन्छ; पीसीबी भोल्यूम3वर्ग मीटर भन्दा बढीको लागि, प्राय: फिक्स्चरद्वारा परीक्षण गरिएको, यो अधिक छिटो हुनेछ। पीसीबी उत्पादनमा त्यहाँ धेरै चरणहरू छन्, हामी प्राय: प्रत्येक चरण पछि निरीक्षण गर्छौं।
W. तपाईको प्याकेज के हो?
आन्तरिक वैक्यूम प्याकेज र आउट कार्डनको साथ।
यो ग्राहकमा निर्भर हुन्छ, कहिलेकाँही हामी हाम्रा फारवर्डरमार्फत जहाजमा जान्छौं, जो DHL, TNT, UPS, FedEx, र यस्तै अन्य को एजेन्सी पनि हो। हाम्रो फारवर्डर हामीले ती अभिव्यक्त इन्टरप्राइजबाट सीधा पाउनु भन्दा निकै राम्रो फ्रेट लागत प्रदान गर्न सक्दछौं।
W. तपाईको उत्पादन क्षमता के हो?
हाम्रो क्षमता प्रत्येक महिना औसत ,000०,००० वर्ग मिटर छ।
I. मसँग पीसीबी नमूना मात्र छ, पीसीबी फाईल हैन, के तपाईं यो मेरो लागि उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ?
हो, हामी तपाईंको नमूनाको आधारमा फाईल प्रतिलिपि गर्न सक्दछौं, यो फाईलको नाम Gerber, र उत्पादन Gerber फाइलमा स्वीकृत हुन्छ।
C. तपाईं Gerber फाइल डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ?
हामी Gerber फाइल डिजाइन गर्न सक्छौं यदि ग्राहकले हामीलाई योजनाबद्ध प्रदान गर्न सक्दछ, योजनाबद्ध नमूना पनि प्रदान गर्न सकिन्छ यदि ग्राहक चाहनुहुन्छ भने।
PC। कस्तो प्रकारको पीसीबी फाईल ढाँचा तपाईले उत्पादनका लागि स्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ? तपाइँ कुन CAM सफ्टवेयर प्रयोग गर्नुहुन्छ?
हामी उत्पादनको लागि Gerber फाइल स्वीकार गर्दछौं। CAM350, GENESIS, UCAM, CG-CAM, V-2000।
१०.के तपाईले मलाई एक प्यानलमा धेरै भाग नम्बर राख्न अनुमति दिनुहुन्छ?
हो, यो हामी कारखानामा सामान्य रूपमा हुन्छ, यस तरिकाले ग्राहकहरूलाई केहि कम गर्न र एक निश्चित डिग्री गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ, यसले केही विधानसभा लागत घटाउन मद्दत गर्दछ।
११. तपाईको न्यूनतम अर्डर मात्रा के हो?
हामीसँग MOQ मा कुनै सीमा छैन, प्रोटोटाइप, मध्यम भोल्युम र ठूलो खण्ड सबै स्वीकार्य छन्।
१२.विल ROHS लीड-फ्री कस्टम स्प्याक। बोर्डहरू लीड-फ्री प्रतीकको साथ चिन्ह लगाइनेछ?
हो, सक्छ, तर ग्राहकलाई फाइलमा यो आवश्यकता निर्दिष्ट गर्न आवश्यक छ।
१.. के मेरा डिजाइन फाइलहरू सुरक्षित छन् जब म तिनीहरूलाई निर्माणको लागि तपाईं समक्ष पेश गर्छु?
कुनै पनि ग्राहकको फाईल यहाँ हाम्रो कारखानामा धेरै नै सुरक्षित हुनेछ र हामी कुनै तेस्रो पक्षलाई थाहा दिनेछैनौं। हामी तपाईंसँग एनडीए साइन इन गर्न सक्दछौं।
अघिल्लो: एल्युमिनियम एलईडी बल्ब लाइट पीसीबी, OEM MCPCB निर्माता
अर्को: PTR / IR सेन्सर मुद्रित सर्किट बोर्ड पीसीबी कन्ट्रोल LED प्रकाश को लागी
Mcpcb नेतृत्व बोर्ड
उत्तम गुण उच्च शक्ति एल्युमिनियम LED PCB 220v, ...
प्रत्यक्ष थर्मल मार्ग MCPCB र सिंक-प्याड MCPCB, C ...
LED MCPCB मुद्रित सर्किट बोर्ड पीसीबीए सेवा एफ ...
शेन्ज़ेन शीर्ष गुणवत्ता एल्युमिनियम PCB MCPCB टासँग ...